Weerar Khasaare dhimasho iyo dhaawac dhaliyay oo Xalay ka dhacay Saldhig ku yaala Galkacyo – SBC
Weerar Khasaare dhimasho iyo dhaawac dhaliyay oo Xalay ka dhacay Saldhig ku yaala Galkacyo
Posted by Webmaster on May 7, 2013 Comments
Mid ka mid ah 4 Askari oo Xalay ku dhaawacmay weerar Bam oo lagu qaaday Saldhig ku yaala Xaafada Garsoor ee magaalada Gaalkacyo ayaa u geeriyooday Dhaawacii soo gaaray ka dib markii la gaarsiiyay si loogu daweeyo Isbitalka Magaaladaas.
Qaar ka mid ah Saraakiil ka tirsan Saldhigaasi oo saxaafada siiyay faah faahintan Warkan ayaa sheegaya in ninkan uu qabay dhaawac halis ah sidaasi awgeedna uu u geeriyooday .
Waxaa intaasi ay ku dareen in dhaawaca kale ee 3da askari uu yahay mid iska fudud oo iminka dawooyin lagula tacaalayo isbitalka guud ee magaalada Gaalkacyo.
Habeen nimadii xalay ayay aheyd markii kooxo aan heybtooda la aqoonin ay weerar bam u geysteen Saldhiga Miir ee Xaafada garsoor kuwaas weerarka bam ka dib rasaas hubiyay saldhiga sida ay xaqiijiyeen dadka ku dhaqan deegaanka Xaafadaas.
Saraakiisha Amaanka waxa ay sheegeen in ay wadaan Baaritaano ay ku daba galayaan kooxihii weerarka geystay, kuwaas oo baxsaday ka dib weerar .
Sikastaba ha ahaatee lama garan karo ilaa iyo iminka sababta weerarka loola eegtay saldhiga Miir waxaase saraakiishu sheegayaan in ay kujiraan baaritaan ay ku ogaanayaan markii uu u soo dhamaadana ay saxaafada u faah faahin doonaan.